लकडाउनमा भोकै परेका जनावरलाई खाना खुवाउँदै अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी | Kendrabindu Nepal Online News
कोरोना अभियानमा खुलेर जागरूक भएकी अभिनेत्री हुन् वर्षा सिवाकोटी । उनी यति बेला सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छिन् भने उनको सक्रियता सामाजिक काममा पनि देखिन थालेको छ । केही दिन अगाडि मात्र वर्षाले कोरोना सङ्क्रमितको सहयोगका लागि १ लाख सहयोग गरेकी थिइन् ।
यसैबीच आफ्नो घर वरिपरि रहेका जनावरलाई खान खुवाउन अपिल गर्दै आईरहेकी वर्षाले आफूबाटै घर बाहिर छोडिएका कुकुरलाई खाना खुवाउन सुरु गरेकी छिन् । सामाजिक संजालमा कुकुरहरुलाई खाना दिईरहेको भिडियो पोस्ट गर्दै उनले लेखेकी छिन् – ‘दिन दिनै नयाँ नयाँ परिकारहरु घरमा बनाएर खाइरहेका छौँ । तर यिनीहरुको बारेमा कसले सोच्ने जो हाम्रो खानामा निर्भर छन् । न बोल्न नै सक्छन् न भोक लाग्यो भन्न नै । हामी सबैमा यिनीहरु प्रति माया नहोला तर मानवता भने पक्कै छ । आफ्नो घर वरिपरिका जनावरहरुलाई आफुले सक्नेसम्म खाना खुवाऔँ ।’
दिन दिनै नया नया परिकार हरु घर मा बनायेर खाइ रहेका छौ तर यिनि हरु को बारे मा कस्ले सोच्ने जो हाम्रो खाना मा निर्भर छन ? न बोल्न नै सक्छन न भोक लाग्यो भन्न नै ! हामि सबै मा यिनि हरु प्रति माया नहोला तर मानवता भने पक्कै छ !! आफ्नो घर वरिपरि का जनावर हरु लाइ आफु ले सक्ने सम्म खाना खुवाउ 🙂 P.S : They don’t spread virus !! #feedstrayanimals #showhumanity #spreadlove @aatmoutsarganepal ♥️
A post shared by Barsha Siwakoti (@barsha.siwakoti) on Apr 1, 2020 at 3:29am PDT
लक डाउनको कारण सडकमा रहेका कुकुरहरू भोकै परेका छन् । होटेल, रेस्टुरेन्ट, मासु पसल लगायतबाट बढी भएका र फालिएका खानाबाट भोक मेटाइरहेका यी जनावरहरु यति बेला निकै समस्यामा परेका छन् । त्यसैले सबैले आ आफ्नो घर वरिपरि देखिने यस्ता निर्दोष जनावरलाई सहयोग गर्न वर्षाले अपिल गरेकी हुन्।
Barsha siwakoti, barsha siwakoti feeding the dogs, barsha siwakoti social work
Prevजब सङ्क्रमित बोक्न हिडेको एम्बुलेन्सका चालक नै भागे…!
प्रधानमन्त्री ज्यू ! ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्नुहोस्, सरकार र पार्टी बचाउनुस् (विशेष सम्पादकीय)Next
ठण्डी मौसममा वर्षाको गर्मागर्मी अवतार (फोटोफिचर)
वर्षाको बर्थडेमा आफुजत्रै नक्कली वर्षा उपहार दिईएपछि…(भिडियोमा)